कस्तो पानी पिउँदैछन् काठमाडौंवासी ? हेराै बिस्तृतमा — Imandarmedia.com
कस्तो पानी पिउँदैछन् काठमाडौंवासी ? हेराै बिस्तृतमा
मुहानमा दिसाको रासदेखि फोहोरको डङ्गुरसम्म
काठमान्डाै । झण्डै २५ वर्षदेखि चर्चामा रहेको मेलम्ची खानेपानी पर्खिंदा पर्खिंदै काठमाडौंवासीको आँखा टट्टाइसके । तैपनि मेलम्चीको पानी अझै काठमाडौंका धारामा झरेको छैन । मेलम्चीले नमेटाएको तिर्खा अहिले काठमाडौंबासीहरुले आसपासका सानातिना खोलानालाबाट पूरा गरिरहेका छन् । ती स्रोतमा उपलब्ध पानी ट्यांकरमा ढुवानी गरिन्छ ।ट्यांकरको पानीलाई धेरै काठमाडौंबासीले खाना बनाउने वा स्नान, भाँडा बर्तन धुनेजस्ता आन्तरिक काममा नै प्रयोग गर्छन् ।
धेरैले त यही पानीलाई सीधै पिउनेसमेत गरेका छन् । तर, यो पानी पिउन लायक छ कि छैन ? भनेर कसैले पनि हेर्ने गरेका छैनन् । ट्यांकरले घरघरमा लैजाने पानी कहाँबाट ल्याउँछ ? कस्तो शुद्ध पानी ल्याउँछ ? भन्ने बारेमा कसैले पनि ध्यान दिँदैन । तर, यही धेरैलाई चासो नभएको विषयमा गम्भीर खेलाची हुने गरेको भेटिएको छ । सुदर्शन अर्यालले लेख्नुभएको यो समाचार हामीले अनलाइन खबरबाट साभार गरेका हौ ।
काठमाडौंबासीलाई सबैभन्दा धेरै घरायसी प्रयोजनको लागि पानी ओसार्ने हरियो स्टिकर भएको ट्यांकरको पछिपछि लागेर हामी काठमाडौंको बल्खुदेखि चोभार हुँदै उता लाग्यौं । चोभारको जंगल सकिने बित्तिकै रहेको चक्रतीर्थ वाटर सप्लायर्स प्रालि छ । यो अन्य प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने पानी भर्ने ठाउँ हो । त्यसको केही पर टोदह कटेपछि कीर्तिपुर नगरपालिका र दक्षिणकाली नगरपालिकाको सीमाना छुट्याउने खहरे खोला आउँछ । सोही खहरे खोलाको किनारमा ४ वटा पानी सप्लायर्स कम्पनीहरु रहेका छन् । जसले मुहानको पानी भन्छन् र खोलाको पानी उठाएर बेच्ने गरेको भेटिएको छ ।
त्यहाँ हषिर्त पानी सप्लायर्स, महालक्ष्मी खानेपानी सप्लायर्स लगायत ३ जटा निजी पानी वितरण कम्पनी र एउटा दक्षिणकाली नगरपालिकाको दक्षिणकाली खानेपानी सप्लायर्स सञ्चालनमा रहेका छन् । तीन कम्पनी कीर्तिपुर तर्फ छ भने दक्षिणकाली पानी सप्लायर्स दक्षिणकाली नगरपालिका तर्फ छ ।हामीले त्यहाँ पुगेर सबैभन्दा पहिले हषिर्त कम्पनीका सञ्चालक र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुसँग पानी प्रशोधन र सप्लाईको विधिको बारेमा कुरा गर्यौं । त्यहाँका सञ्चालक र कर्मचारीहरुले त्यहाँ मूलबाट सिधै पानीलाई पाइप मार्फत् ल्याएर फिल्टर गरेर राख्ने बताए ।
उनीहरुले पानीमा कुनैपनि औषधि हाल्नु नपर्ने भन्दै मुहानको पानी सिधै पिउन पनि सक्ने बताए ।उनले भनेको मुल कस्तो रहेछ र सिधै पिउन मिल्ने पानी कस्तोे रहेछ ? भनेर खहरे खोला खोलै एक किलोटिर जति माथि तिर लाग्यौं । त्यहाँका आसपासका मानिसहरुको हवाला दिँदै उनीहरुले मूलको पानीमाथि शंका नगर्न आग्रह गरे । त्यहाँ एक ट्यांकर पानीको साढे ३ सय रुपैयाँ लिने गरेको र काठमाडौंमा ल्याउँदा ५ हजार लिटरको ट्यांकरको १७ देखि १८ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेको बताए । उनीहरुले आफूले पानी संकलन गरेको ट्यांकी देखाएनन् र पानी शुद्ध भएको भन्दै त्यसमा शंका नगर्ने बारम्बार आग्रह गरे ।
चक्रतीर्थ पानी सप्लायर्सकी सञ्चालिक सृजना नगरकोटीले आफूहरुले पहेँलो स्टिकरको ट्यांकरमा पनि पानीलाई फिल्टर गरेर पठाउने गरेको जानकारी दिइन् । आफ्नो कम्पनीले इनारबाट पानी तालेर बिक्री गर्ने भएकोले पनि फिल्टर गर्ने गरेको बताइन् । एकातर्फ खिया लागेर रातो रातो भइसकेको त्यो ट्यांकर भित्रबाट सफा नहुने र अर्काे तर्फ मूलको पानी भनेर खहरे खोलाको पानी बेच्ने गरेको भन्ने जानकारी पाएपछि हामीहरु मूलको खोजी गर्दै उनीहरुले पाइप गाढेको खोदा खोलै माथि तिर उकालो लाग्यौं ।सडकबाट झण्डै एक किलोमिटरजति माथि पुग्दासम्म यस्तो दृश्य देखिन्छ, जुन सम्झिएपछि ट्यांकरको पानी पिउन पनि धेरैलाई संकोच हुनसक्छ ।एक किलोमिटर हाराहारीमा खोला माथि पुगेपछि त्यहाँ खोलाको १० मिटर जति माथि एउटा ट्यांकी राखिएको छ । खुल्ला रुपमा रहेको सोही ट्यांकीमा पाइप राखेर पानी तल पानी नियन्त्रण गर्ने कार्यालयसम्म ल्याउने गरिन्छ । तल ल्याएपछि फिल्टर विधि मार्फत् फिल्टर गरिने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । त्यो प्रशोधन पछि पनि अर्काे ट्यांकीमा राखिन्छ । जुन माथिको जस्तै फोहोर छ ।
खोलैखोला त्यो ट्यांकी भएकोभन्दा ५०० मिटर जति माथि पुग्दा त्यहाँ एउटा प्रचलनमा नै रहेको मानिसको लास जलाउने घाट छ । त्यहाँ मानिसको लास जलाउँदा कत्तिको फोहोर हुने कुरालाई बेवास्ता गर्दा पनि त्यो घाट नपुग्दै खोलाको किनारमा नै दुई ठाउँमा मानिसले दिसा गरेको भेटिन्छ । स्थानीयका अनुसार त्यहाँ त्यही ट्यांकरका चालक र सहचालकहरु समेत पानीको सहज हुने भएकोले खोलाको किनारतिर नै शौच गर्न जाने गरेको बताउँछन् ।पानी सप्लायर्सको ट्यांकीको ठिक विपरित अर्काे सामुदायिक ट्यांकी बनाइरहेका जीवलाल श्रेष्ठले खोलामा उनीहरुकै साथीभाइ र धारामा नुहाउन आएकाहरुले त्यस्तो फोहोर गर्ने गरेको बताए । सो ठाउँमा केही माथि हेर्दैजाँदा खोलामा कै ढुंगामा दिसा गरिएको ठाउँ भेटियो । जुन हल्का पानी परेर पनि खहरे खोला ठूलो भयो भने त्यो दिशा बगेर सिधै खानेपानीको ट्यांकीमा पुग्ने गर्छ । त्यही खोलामा नै कुखुरा मारेर पोलेर खाएको खरानी, कुखराका भुत्लाहरु आदि पनि भेटिन्छ ।
चरण चरणमा फोहोरको चक्र : ट्यांकरले बेच्ने पानीहरु चरण चरणमा फोहोर थपिँदै आउने गर्छ । पहिलो त मुहानमा नै यति फोहोर पानीमा मिसिएको हुन्छ । त्यो पाइपको माध्यमबाट अर्काे ट्यांकीमा आउँछ । जुन कैयौं समयसम्म सफा हुने गरेको हुँदैन । त्यसरी कम्पनीले पानी भरिदिने ट्यांकरहरु आफैंमा खियाले रातो भएका ट्यांकरहरु हुन्छन् ।उनीहरुले छिटो सफा गर्ने तीन महिनामा एक पटक सफा गर्ने गरेको उनीहरु नै बताउँछन् । कसैले त एक वर्षमा एक पटक पनि सफा गर्ने गरेका छैनन् । यसरी ट्यांकरमार्फत् घरसम्म आइपुग्दा पानी पिउन नै नहुने भइसकेको हुन्छ । त्यसपछि ट्यांकरको फोहोर पाइप मार्फत् घरको ट्यांकीमा राखिन्छ । ट्यांकीमा लामो समयसम्म राख्नु आफैंमा हानिकारक कुरा हो ।यसरी मुहानबाट मानिसको भान्सासम्म आउँदा विभिन्न चरणमा पानीले आवश्यक पर्ने खनिज जस्ता गुणहरु गुमाइसकेको हुन्छ । त्यो केवल एउटा पेय पदार्थ बनेको हुन्छ । जहाँ अलिकती पनि पोषिलो बाँकी नरहने जानकारहरु बताउँछन् ।